China Fridge Magnet fekitori uye vagadziri | YANJIN
Saizi: 6 * 6cm
MOQ: 200pcs imwe dhizaini
Lead nguva: 20-35days
Isu tine akasiyana magadzirirwo esarudzo yako. Isuwo tinogona kupenda zvigadzirwa zvako pane iyo tile. Uye OEM sevhisi inowanikwa.
Iyo magineti kumashure kwayo inogona kusungirirwa kune chero ferrous pamusoro uye magnetic board. Senge simbi yakatswanywa firiji madhoo, masherufu esimbi, hoods dzemahara, ovhoni, mahofisi makabati, masuo ekuchengetedza, magineti emabhodhi, magineti machena, magineti evana vanodhirowa, nezvimwe zvinogona kushandiswa kutora mapikicha, manotsi anonamira, mareti, nezvimwe.
Haigone kushambadzirwa pane yakadzikama girazi firiji masuo, madhoo emapuranga, madziro, girazi.
Ceramic zvinhu hazvipikisane nekudonha, ita chokwadi chekubata zvinyoronyoro, ndapota usatsvaira kumberi nekudzoka pane firiji kuti urege kukwenya. Basa guru nderekushongedza imba, kwete yekutambira vana.
Kukura: 6 * 6cm
Mutengo unonzwisisika nehupamhi hwepamusoro
4. MOQ: 200pcs imwe dhizaini
5. Lead nguva: 20-35days
Magineti edu akapendwa neruoko neruvara runopenya rwemuraraungu, Wedzera kupenya kwemavara kune yako firiji kana kuisa makabati neaya akasarudzika magineti!
1. Anochinjika - Isa anosvika nyowani magineti akanaka kune chero simbi kana magineti pamusoro, senge remagineti bhodhi, dhomitari, mepu, mafiriji, mhepo mahara, makiyi, michina yekuwachisa, magineti akaoma erase bhodhi, mafaira ehofisi yesimbi nezvimwe, uye zvakare anogona clip mifananidzo.
2.Kushongedza - Kugadzira mapatani, kupenya ruvara, wedzera runako pakushongedza kwako.
3. Yakasiyana dhizaini yakaitwa nemaoko tile, senyika, maodzanyemba akadziva kumadokero, echinyakare, erudo, Victorian, oceanic, mhuka, shiri, maruva, miriwo, nezvimwe. Tinogona zvakare kugadzira nekugadzira zvinoenderana nekudhirowa kwako uye kukumbira.
4. Maoko ese akapendwa nevashandi vedu vehunyanzvi.
5.Usage: Sutu chero chemukati shongedzo yemarudzi ese enzvimbo.
Pashure: Ruoko Rwakashongedzwa neCeramic Yakashongedza Art Tile
Zvadaro: Akagadzirwa Matiles